आईपी द्वारा कसरी व्यक्ति पत्ता लगाउने?
कम्प्युटरहरू, सूचना प्रविधि
यो लामो समयसम्म कुनै रहस्य छैन कि यो आईपी ठेगाना हो जसले तपाईंलाई साइटसँग सम्पर्क गर्न मद्दत गर्दछ, च्याटमा जानुहोस्, साथीहरूसँग च्याट गर्नुहोस्, अनलाइन गेमहरू प्ले गर्नुहोस्। IP ठेगानाको बारेमा कुनै जानकारी छैन, कम्प्यूटरले तपाईलाई सिर्जना गर्नुभएको क्वेरीमा जानकारी पठाउनको लागी बिल्कुल थाहा छैन। तपाइँ, प्रायः, पहिले नै आफैलाई थाहा छ कि ip द्वारा कसैले पत्ता लगाउन सम्भव छ, किनभने तपाईंले साइट भ्रमण गर्नु भएको थियो, तपाईंको प्रदायक वा शहर स्वचालित रूपमा निर्धारण भएको थियो। तर केवल व्यक्तिको बारेमा पूर्ण जानकारी, तिनको नाम र ठेगानाले विशेष सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्छ। तर यस पछि थप।
संचार प्रविधिको प्रयोगको बावजुद, प्रदायकले सूचीबाट ठेगाना असाइन गर्दछ। र यो प्रक्रिया हरेक समय हुन्छ जब तपाइँ इन्टरनेटमा जडान गर्नुहुन्छ।
आईपी दिइने डेटाले कसरी आई र आईपी द्वारा व्यक्ति पत्ता लगाउन सक्छ? यदि केहि आउटटरले तपाईंको आईपीलाई जान्दछ भने, उनी सजिलै संग तपाइँ कहाँ बस्नुहुन्छ र तपाईंको ISP को बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। घटनामा तपाइँ एक ठूलो क्षेत्रीय प्रदायक द्वारा सेवा गरिरहनु भएको छ, यो सम्भव छ कि तपाईंको शहर सूचीमा समावेश हुनेछैन, किनकि प्रदायकले एकदम राम्रो क्षेत्रको क्षेत्रलाई समावेश गर्दछ। यसैले, प्रश्नको जवाफ दिंदा आईपी कसरी व्यक्ति पत्ता लगाउन , यो ध्यान दिनुपर्छ कि इन्टरनेट स्रोतहरूले मात्र यस्तो जानकारी प्रदान गर्दछ। उदाहरणका लागि, तपाईं साइट 2ip.ru अथवा whois2.ru मा जान सक्नुहुन्छ
हामी साइट जो gois2.ru मा जान्छौं। खोज इञ्जिनमा, तपाईंले कुनै पनि अन्य सेवा फेला पार्न सक्नुहुनेछ जुन IP ठेगानामा जानकारी प्रदान गर्न सक्दछ। यो धेरै को एक मात्र साइट हो। हामी यसलाई एक उदाहरणको रूपमा विचार गर्नेछौं। यो साइट रुसीमा छ, जुन खोजीलाई सजिलो बनाउँछ।
खाली फिल्डमा, हामीले आईपी ठेगाना प्रविष्ट गर्यौं, जुन हामी जानकारी प्राप्त गर्न चाहन्छौं। "जो! एस?" बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। उदाहरणको लागि, "91.199.153.5"।
हामी आईएसपी को मालिक को बारे मा जानकारी प्राप्त गर्दछ, कुन शहर र कुन ठेगाना कम्पनी दर्ता भएको छ। साइटले हामीलाई केही उपयोगी दिनेछ, तर ठेगाना जान्दछ, कहाँ पुग्न सकिन्छ, हामी सँधै प्रदायक हेर्न सक्छौं र जानकारी स्पष्ट गर्न सक्छौं। यदि यो आईपी ठेगानाको व्यक्तिले तपाईंलाई कुनै पनि तरिकामा हानिकारक बनाएको छ, र तपाईंसँग उनीहरूको आपराधिक गतिविधिको प्रमाण छ भने, तपाइँ निश्चित रूपमा कम्प्युटरको मालिक फेला पार्न मद्दत गर्नेछ।
यो ध्यान दिनुहोस् कि वास्तविक वा स्थिर आईपीमा पनि तपाईंले मात्र प्रदायक ठेगाना ठेगाना पाउन सक्नुहुनेछ। यस कारणको लागि, इन्टरनेट मार्फत आईपी ठेगाना द्वारा कसरी एक व्यक्ति पत्ता लगाउनको प्रश्नको जवाफ स्पष्ट रूपमा बुझ्न गाह्रो छ। अधिक विस्तृत जानकारी तपाईले केवल प्रदायकबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, न केवल ठेगाना, नाम र उपनाम सहित, तर कुन समय पनि एक व्यक्ति इन्टरनेटमा गए, कुन साइटहरू उसले भ्रमण गर्यो, उसले के गरे, त्यो साइटमा कति रहिरह्यो। तथापि, यो सबै जानकारी केवल सरकारी संस्थाहरूको अनुरोधमा कानुनी आधारको उपस्थितिमा खुलासा गरिएको छ। यो आवश्यक छ भने छोटो छ, तपाई अझै पनि फेला पार्नुहुनेछ।
यसैले, आईपी ठेगानाले इन्टरनेट प्रदायकको स्थान बारे जानकारी प्रदान गर्न सक्छ, जसको सेवा तपाईले चासो चासो राख्नुहुन्छ। यसको अतिरिक्त, हाम्रो देशमा व्यावहारिक रूपमा कुनै स्थिर आईपीहरू छन्।
यदि व्यक्ति जानबूझकर आईपी लुकाउन चाहनुहुन्छ भने खोजहरू जटिल हुन सक्छ। त्यसपछि यो छायामा रहन विशेष प्रोक्सी सर्भर प्रयोग गर्दछ। यस्तो अवस्थामा, एक साधारण प्रयोगकर्ताको लागि फेला पार्न धेरै गाह्रो छ वा असंभव हुनेछ।
अब तपाईलाई थाहा छ कि आईपी द्वारा कसरी व्यक्ति पत्ता लगाउन सकिन्छ। तर तपाईले गर्नु अघि, के तपाईलाई साँच्चै यसको आवश्यकता छ कि सोच्नुहोस्। निस्सन्देह, त्यहाँका घटनाहरू छन् जब एक व्यक्तिले कानून उल्लङ्घन गरेको छ वा समस्यामा परेको वा आकस्मिक अवस्था थियो। त्यसपछि आईपी यसको स्थान निर्धारण गर्न प्रयोग गरिन्छ, तर, हामीले पहिले नै उल्लेख गरिसकेपछि, उनीहरूलाई IP ठेगाना इन्टरनेट प्रदायकहरू र पावर र मानव अधिकार संरचनाहरू जसले व्यक्तिबाट जानकारी प्राप्त गर्न सक्दछ भनेर कसरी जान्दछ। एक नियमित प्रयोगकर्ता सक्षम हुनेछ, जब सम्म, जहाँ व्यक्ति लाइसेन्स र प्रदायक लाई शहर स्पष्ट गर्न को लागी। सम्भव छैन कि यस्तो जानकारी मानिसहरूको खोजीमा महत्त्वपूर्ण हुनेछ। इन्टरनेटमा मुख्यतया जानकारी आदान प्रदान गर्ने काम गर्छ, र सम्बन्ध स्पष्ट गर्न को लागी।
NBSP - के यो छ? खाली स्थानको महत्त्व
ओपेरा टर्बो: कसरी सक्षम गर्ने। हाइलाइटहरू
उत्पत्तिमा कसरी रजिस्टर गर्ने - विस्तृत निर्देशनहरू
Teamviewer6डाउनलोड
दोस्रो साना समूहमा नाटकीय खेल को कार्ड फाइल। को उद्देश्य फाइल: दोस्रो जुनियर समूहमा नाटकीय खेल पूरा
Piezoelectric सेन्सर: वर्णन, प्रवेग, काम सिद्धान्त र विशेषताहरु